Nugesic(VitB1+B6+B12) – Online Myanmar Pharmacy
Nugesic(VitB1+B6+B12) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
နျူဂျက်ဆစ် ဆေးသည် အာရုံကြောရောင်ရမ်းခြင်း ၊ အာရုံကြောနာကျင််ခြင်း၊ လက်ပြင်ကျခြင်း ၊ ခါးကြောညှပ်ခြင်း ၊ ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်း ၊မီးညောင့်ရိုးအာရုံကြောနာကျင်ခြင်း ၊ အဆစ်ကိုက်ခြင်း စသောအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများတွင် နာကျင်သက်သာစေရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Nugesic is indicated for the treatment of following diseases:
Neuropathy, Neuritis, Neuralgia, Cervical Syndrome, Shoulder Arm Syndrome, Lumbago, Sciatica, Myalgia, Intercostal Neuralgia, Trigeminal Neuralgia and Arthritis. It is also indicated whereadeficiency of the relevant vitamins exists.